Xog: NISA iyo Villa Somalia oo doorashada isku khilaafay, maxaa la isku hayaa? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Khilaafka doorashada Soomaaliya ayaa markan u gudbay Villa Soomaaliya iyo shaqsi kamid ah kuwii ugu dhawaa ee xagga amaanka.
Waxaa uu ismari waagan u dhaxeeyaa sida xogta lagu helayo madaxweyne Farmaajo iyo Korneyl Cabdullahi Daahir oo loo yaqaano Cabdullahi Dheere kuna magacaaban taliyaha dabagalka ee NISA, iyadoo uu salka ku hayo qabashada doorashada iyo magaalooyinka maamul goboleedyada.
Cabdullahi Daahir, Cabdullahi Dheere ayaa madaxweynaha kaga soo horjeestay xiisadda gobolka Gedo, waxaana uu rabitaankiisu yahay in min hal magaalo lagu qabto doorashada, hadii la diidana ay tahay in maamulla Jubbland si toos ah loogu madaxbaneeyo Gedo.
Khilaafkan waxaa uu si adag u saameeyay lagana dareemay labada xafiis ee Villada iyo NISA, inkasta oo wararku sheegayaan in Fahad Yaasiin uu ka gaabsaday dhex galkooda maadaama uu midkasta saaxiib dhaw la yahay.
Waxaa saraakiil ka tirsan dowladda ay tilmaameen in arintan ay hortaagan tahay go’aan sax ah oo ay madaxda Federalka ka qaataan magaalooyinka ay doorashadu ka dhaceyso, iyadoo sababta madaxweyne Farmaajo uu Cabdullahi Dheere uga tala gelinayo ay tahay inuu yahay mas’uulka amniga guud ee magaalooyinka sidaasina aysan ku socon karin arin aan lagala tashan.
Xaaladdu waa mid wal wal abuureysa, maadaama khilaafki ka dhex aloolsamay Farmaajo iyo Cabdullahi Dheere oo kamid ah saaxiibadiisa ugu dhaw, cabsiduna waxay kaloo tahay in doorashada ay dib markale ugu sii dhacdo khilaafkan awgii oo ay sii jiitanto illaa sanadka soo socda ee 2022.
Korneel Cabdullahi Daahir, Cadullahi Dheere ayaa la rumeysan yahay in go’aankiisa ah ama doorashada mid hal magaalo halagu qabto ama Gedo haloo madax baneeyo maamulka Jubbaland ay ku taageersan yihiin xubno kale oo dowladda federalka ku jira, maamul goboleedyada qaar iyo wakiilada beesha caalamka barkood.
Hadii uu sii daba dheeraado khilaafka Villada iyo laanta dabagalka ee NISA ayaa xukuumadda uu Rooble hogaamiyo ka wal walsan tahay inuu wiiqo amniga iyo habsami socodka doorashada, inkasta oo culeysyadu badanyihiin.
Dhanka beesha caalamka oo ka cagajiideysa bixinta lacagta ka badan 30-ka milyan doolar ee doorashada ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa in ay murankaan la socdaan iyo arinta gudiyada oo aan wali laga dhamaan.
Safiirada dowladaha caalamka xubno kamid ah ayaa qaba soo jeedinta ah in doorashada Soomaaliya si xal fudud loogu helo lagu soo koobo min hal magaalo taasi oo meesha ka saareysa ku dhagnaanshaha Farmaajo ee Gedo, waana la eeganayaa natiijada ka dhalata is qabsigan Farmaajo iyo saaxiibkiisi dhawaa Korneel Cabdullahi Dheere.